को हुन बम विस्फोटबाट ज्यान गुमाउने प्रज्वल शाही ? — Motivatenews.Com
को हुन बम विस्फोटबाट ज्यान गुमाउने प्रज्वल शाही ?
काठमाडौं – काठमाडौंको अनामनगरस्थित घट्टेकुलोमा भएको कुकर बम विस्फोटमा प्रज्ज्वल शाहीको ज्यान गएको छ । आइतबार घट्टेकुलोस्थित लोकमन्जरी कार्कीको एक तले घरमा कुकर बम विस्फोट हुँदा प्रज्वल शाहीको मृत्यु भएको हो ।
बझाङ घर भएका शाही नेत्रविक्रम चन्दसँग विप्लव नेतृत्तवको नेकपा निकट विद्यार्थी सङठनका केन्द्रीय सदस्य थिए । नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले अनामनगरको घट्टेकुलोमा विप्लवनिकट विद्यार्थी नेताको ज्यान गएको बताए ।
उनी अखिल क्रान्तिकारी सीटीइभीटी इकाइका सभापति थिए । यो बम विस्फोटमा त्रिचन्द क्याम्पसमा विप्लवका विद्यार्थी इकाई सभापति रविन केसी घाइते भएका छन्।
उनी निकट सन्तोष विष्टका अनुसार प्रज्ज्वल शाही बझाङबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौं छिरेका थिए । उनले २ जना भाइहरु दिवस, विवस र एक बहिनीलाई पनि काठमाडौंमै पढाउन ल्याएका थिए।
सिटिइभीटीबाट फार्मेसी पढेर केही समय मेडिकल पसल सञ्चालन गरेका उनी विप्लवनिकट अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य थिए । उनै प्रज्वलको घट्टेकुलो विस्फोटमा मृत्यु भएको हो । सुकेधाराको विस्फोटमा परी महोत्तरी घर भई अहिले सुकेधारामा सैलुन चलाउँदै आएका ५९ वर्षीय जीवकुमार ठाकुरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ।
अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका अन्य २ जनाको सनाखत भएको छैन। विप्लवनिकट नेवा मुक्ति मोर्चाका राजेन्द्र महर्जनको मृत्यु भएको बताइए पनि पुष्टि हुन सकेको छैन। घट्टेकुलोको घटनास्थलबाट विप्लव नेकपाको पर्चा भेटिएको छ।
सुकेधारमा मारिएका ठाकुर भने हजाम भएको खुलेको छ। उनी विप्लवको पार्टीमा आबद्ध थिएनन्।
भोजपुरमा कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरेको प्रहरीले चलाएको गोलीबाट मृत्यु भएपछि विप्लव नेकपाका महासचिव विप्लवले बदला लिने चेतावनी दिएका थिए।
तर घट्टेकुलो र सुकेधारामा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा विप्लवकै तीन कार्यकर्ता मारिएका छन्। नागढुंगामा २ सहित बम विस्फोटका घटनामा सातजना घाइते भएका छन्।